မကျန်းမာလို့ ဆေးခန်းပြရာမှ မကြင်နာတဲ့ ဆရာဝန်ကြောင့် မျက်ရည်ပါကျ ခဲ့ရကြောင်းပြောလာတဲ့ ခင်ရူပ – Shwe Likes
မကျန်းမာလို့ ဆေးခန်းပြရာမှ မကြင်နာတဲ့ ဆရာဝန်ကြောင့် မျက်ရည်ပါကျ ခဲ့ရကြောင်းပြောလာတဲ့ ခင်ရူပ
မော်ဒယ် ခင်ရူ ပကေ တာ့ တစ်ခေတ် တစ်ခါက ပုရိသတို ့နှလုံး သားကို အပိုင်စားရ ရှိထားသူတ စ်ယော က်ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ရူပ က အခုဆိုရင် အိမ်ထောင် ကျပြီး အနုပညာအလုပ်ေ တွကိုမလု ပ်ကိုင်ေ တာ့မယ့် သူမခင်ပွ န်းရဲ့စီးပွားေ ရးအလုပ်၊ သူမရဲ့ကို ယ်ပိုင်စီးပွားေ ရးအလု ပ်တွေအပြင် Online Live Sale ရောင်း ချခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ေ နတာပဲဖြ စ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာေ တာ့ ခင်ရူပက အသံအတွ က်ဆေးခန်းပြရာမှ မကြင်နာတဲ့ဆ ရာဝန်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရပုံကို အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။
“စိတ်မကောင်း လွန်းလို့ေ ရးတာပါ။ ဒီနေ့ အသံ အတွက်ဆေးခ န်းပြတယ် မှန်ပြော င်းကြည့်ရတယ်။ ဘယ်သူက ဒီ နှာခေါင်းကြီး ထဲမှန်ပြောင်းထည့် ပြီးကြည့် တာကို used to ဖြစ်မှာလ ည်းဟင်? ထည့်ဘူးပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လော က်က..အခုထပ်ထ ည့်ကြည့်တော့ အရမ်းနာတယ် နာတော့ တစ်ဘ က်ကို ထုံေ ဆးပေးတယ်… အဆင်ပြေတယ် အနာသက်သာတယ်။
အာ့နဲ့ နောက်တစ်ဖက် အစိမ်း ထည့်ပြန်တယ် တအားနာလို့ မခံံနိုင်တော့ ရုန်းမိတယ်အော်တယ် ငေါက်တယ်.. လူနာလေ .. အေးဆေးလေးဆ က်ဆံတော့ဘာြ ဖစ်မှာမို့လို့လည်းရှင် ?? ခယနေဖို့ကိုေြ ပာတာမဟုတ် ဘူးနော် ငြင်သာစေချင်တာ … နွေးထွေးေ စချင်တာ..၂ ခါ ထပ်အနာမခံ နိုင်လို့ ထုံဆေးလေးေ ပးပြီး ဒီနေ့ဘဲအပြီးကြည့်ေ ပးလိုက် ပါတော့လို့ လူပိန်းတစ်ေ ယာက်လို request မိတယ် .. “နင်ဖြစ်ချင်တာ ဘဲနင်သိတယ်” ဆိုပြီး ထပ်ငေါက်ပြန်ရော..”
“ဆေးထည့်ပြီး နက်ဖန်ပြန်ကြည့် ရမယ်တဲ့ .. တော်ပါြ ပီရှင် အသံ အပြီးပြန်မကောင်းရ င်နေပါစေေ တာ့။ နွေးထွေးငြင်သာတဲ့ နေရာသာပြေး ပါတော့မယ်ရှင်။ ခုထိ နာနေ တုန်း ငိုပါငိုရတယ် ငွေရှင်းစော င့်တဲ့နေရာမှာ မခံစားနိုင်လို့ ဆရာ့ရဲ့ ဝသီ ဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒါပေ မယ့် ဆရာ့ကို အရမ်းကြော က်သွားပါပြီ။ ဒါမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ဆရာအခုလိုမဟု တ်ပါဘူး လူကြီးမို့ သည်းခံ ခဲ့ပါတယ်။ နက်ဖန်တော့ ထပ်မ လာတော့ပါ ဘယ်တော့မှလည်း မလာတော့ပါဘူးရှင်” ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ရူပတော့ ကျန်းမာေ ရးအတွက် ဆေး ခန်းပြရာမှ လူနာကိုမကြင်နာပဲ အော်ငေါက်ဆူ ပူတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရပြီး သူမအကြောင်းကို စိတ်မကော င်းစွာနဲ့ပဲ ရင်ဖွင့်လာ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Source: Khin Yupa’s fb
ေမာ္ဒယ္ ခင္႐ူ ပေက တာ့ တစ္ေခတ္ တစ္ခါက ပုရိသတို ့ႏွလုံး သားကို အပိုင္စားရ ရွိထားသူတ စ္ေယာ က္ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္႐ူပ က အခုဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ က်ၿပီး အႏုပညာအလုပ္ေ တြကိုမလု ပ္ကိုင္ေ တာ့မယ့္ သူမခင္ပြ န္းရဲ့စီးပြားေ ရးအလုပ္၊ သူမရဲ့ကို ယ္ပိုင္စီးပြားေ ရးအလု ပ္ေတြအျပင္ Online Live Sale ေရာင္း ခ်ျခင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေ နတာပဲၿဖ စ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေ တာ့ ခင္႐ူပက အသံအတြ က္ေဆးခန္းျပရာမွ မၾကင္နာတဲ့ဆ ရာဝန္နဲ႔ ဆုံေတြ႕ခဲ့ရပုံကို အခုလိုပဲေျပာလာပါတယ္။
“စိတ္မေကာင္း လြန္းလို႔ေ ရးတာပါ။ ဒီေန႔ အသံ အတြက္ေဆးခ န္းျပတယ္ မွန္ေျပာ င္းၾကည့္ရတယ္။ ဘယ္သူက ဒီ ႏွာေခါင္းႀကီး ထဲမွန္ေျပာင္းထည့္ ၿပီးၾကည့္ တာကို used to ျဖစ္မွာလ ည္းဟင္? ထည့္ဘူးပါတယ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ေလာ က္က..အခုထပ္ထ ည့္ၾကည့္ေတာ့ အရမ္းနာတယ္ နာေတာ့ တစ္ဘ က္ကို ထုံေ ဆးေပးတယ္… အဆင္ေျပတယ္ အနာသက္သာတယ္။
အာ့နဲ႔ ေနာက္တစ္ဖက္ အစိမ္း ထည့္ျပန္တယ္ တအားနာလို႔ မခံံနိုင္ေတာ့ ႐ုန္းမိတယ္ေအာ္တယ္ ေငါက္တယ္.. လူနာေလ .. ေအးေဆးေလးဆ က္ဆံေတာ့ဘာျ ဖစ္မွာမို႔လို႔လည္းရွင္ ?? ခယေနဖို႔ကိုေျ ပာတာမဟုတ္ ဘူးေနာ္ ျငင္သာေစခ်င္တာ … ေႏြးေထြးေ စခ်င္တာ..၂ ခါ ထပ္အနာမခံ နိုင္လို႔ ထုံေဆးေလးေ ပးၿပီး ဒီေန႔ဘဲအၿပီးၾကည့္ေ ပးလိုက္ ပါေတာ့လို႔ လူပိန္းတစ္ေ ယာက္လို request မိတယ္ .. “နင္ျဖစ္ခ်င္တာ ဘဲနင္သိတယ္” ဆိုၿပီး ထပ္ေငါက္ျပန္ေရာ..”
“ေဆးထည့္ၿပီး နက္ဖန္ျပန္ၾကည့္ ရမယ္တဲ့ .. ေတာ္ပါျ ပီရွင္ အသံ အၿပီးျပန္မေကာင္းရ င္ေနပါေစေ တာ့။ ေႏြးေထြးျငင္သာတဲ့ ေနရာသာေျပး ပါေတာ့မယ္ရွင္။ ခုထိ နာေန တုန္း ငိုပါငိုရတယ္ ေငြရွင္းေစာ င့္တဲ့ေနရာမွာ မခံစားနိုင္လို႔ ဆရာ့ရဲ့ ဝသီ ဘဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ဒါေပ မယ့္ ဆရာ့ကို အရမ္းေၾကာ က္သြားပါၿပီ။ ဒါမယ့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္က ဆရာအခုလိုမဟု တ္ပါဘူး လူႀကီးမို႔ သည္းခံ ခဲ့ပါတယ္။ နက္ဖန္ေတာ့ ထပ္မ လာေတာ့ပါ ဘယ္ေတာ့မွလည္း မလာေတာ့ပါဘူးရွင္” ဆိုၿပီး ေျပာလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ခင္႐ူပေတာ့ က်န္းမာေ ရးအတြက္ ေဆး ခန္းျပရာမွ လူနာကိုမၾကင္နာပဲ ေအာ္ေငါက္ဆူ ပူတဲ့ဆရာဝန္နဲ႔ ဆုံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး သူမအေၾကာင္းကို စိတ္မေကာ င္းစြာနဲ႔ပဲ ရင္ဖြင့္လာ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Source: Khin Yupa’s fb
မင်းသားကြီး လွင်မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအ ရာလေးတ စ်ခုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်တဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် အေးအေးခိုင်
မိသားစုနဲ့ လပေါင်းများစွာဝေးကွာနေတဲ့ မောင်လေးပို င်တံခွန်ကို သတိ ရနေကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အစ်မဖြစ်သူမေချစ်သွေး